ဇာတ်ရူပ်တဲ့အကြောင်း – Grab Love Story
သာယာကြည်လင်တဲ့ မနက်ခင်း လေးရဲ့အေးမြတဲ့လေညင်းလေးတွေနဲ့အတူသားသားတစ်ယောက် နိုးထလာခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ဆိုရင်ဒီအိမ်ကိုပြောင်းလာတာတစ်ပတ်တိတိရှိပြီလေ။ ဖေဖေရယ်မေမေရယ် တစ်ခန်း ကျွန်တော်ကတစ်ခန်း ၊ မမနဲ့ညီမလေးကတော ကျွန်တော့်ဘေးကအခန်းမှာပေါ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့အညီ လူတွေလဲသွားလာလို့ မနက်ခင်းလေးကသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပြီ။ အိပ်ရာထဲမှာဟိုဒီတွေနေရင်းနဲ့ အခန်းအပြင် ကမေမေအသံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ ခဏဆိုမနက်စာစားပြီးဖေဖေ စက်ရုံသွားတော့မယ်လေ။ မေမေလဲဆိုင်သွားတော့မှာဆ်ိုတော့အိမ်မှာမမရယ်ကျွန်တော်ရယ်ညီမလေးရယ်သုံးယောက်ထဲကျန်ခဲ့ရတဲ့ ရက်တွေကများတယ်။ မမက မေမေ အမရဲ့သမီးပေါ့ ငယ်ငယ်ထဲက မိဘတွေမရှိတော့ ဖေဖေနဲ့မေမေပဲသမီးလေးလိုစောင့်ရှောက်လာခဲ့တာလေ။
အခုဆို မမက ၂၈ ကျွန်တော်က ၂၃ ၊ညီမလေးက ၁၉ ရှိပြီပေါ့။ အားလုံးငယ်ငယ်ထဲကသိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းပါပဲ ချစ်လဲ ချစ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့အောက်အလွှာမှာတော့ မေမေမောင်အငယ်တို့လင်မယားနေကြတယ်လေ။ ဒီလိုနေလာကြရင်းနဲ့ တစ်နေ့ပေါ့မေမေအကိုအကြီးဆုံးကဖုန်းဆက်လာတယ်။ သူလျှောက်ပေးထားတဲ့ Green Card ကရပြီတဲ့လေ။ အဲ့ဒီတော့အိမ်မှာလဲတစ်မျိုးပြောင်းစဉ်းစားရတော့တာပေါ့။ သူတို့သွားမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ပဲကျန်ခဲ့မှာလေ။ ဖြစ်ရဲ့လားပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့သွားဖြစ်ပါတယ် သူတို့အရင်သွားကြည့်မယ် ညီမလေးက၂၁ နှစ်မကျော်သေးတော့လိုက်သွားလို့ရတယ်အဆင်ပြေပြီဆိုလာခေါ်မယ်ပေါ့။ အဲ့လို့နဲ့ ကျွန်တော်တို့မောင်နှမသုံးယောက်နေလာကြတာ သုံးလေး လလောက်ရှိလာတဲ့တစ်နေ့ပေါ့၊ အဲ့ဒီနေ့ကညီမလေးမွေးနေ့လေ ။အိမ်မှာ ပါတီလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့လုပ်ပေးရတယ်။ ညီမလေးသူငယ်ချင်းကောင်မလေး လေးယောက်နဲ့ကောင်လေးနှစ်ယောက်ပေါ့။နေ့လည်စားပြီးကြတော့ သူတို့တွေလျှောက်လည်ကြတဲ့အချိန်အိမ်မှာမမနဲ့ ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တယ်လေ အိမ်ရှေ့မှာထိုင်နေရင်းနဲ့ မမကစပြောလာတယ် ကောင်လေးနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကိုသိလားတဲ့ အဲ့ဒါ အိန်အိန်း ကောင်လေးတဲ့ သူကမမ ကိုပြောပြတယ်တဲ့ ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီတော့မှသိတာပါ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူလဲအရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့ရှိလာပြီပေါ့။
အဲ့ဒီနေ့က မမ၀တ်ထားတာ အိမ်နေရင်းဂါဝန်ပန်းရောင်ပျော့ပျော့လေး ၊ဂါဝန်လေးကပါးတော့အတွင်းက အတွင်းခံဘောင်းဘီပန်းရောင်လေးနဲ့ ဘော်လီ အနက်လေးကိုမြင်နေရတယ်လေ။ မမက လှတယ်ဆိုတာထက်ချစ်စရာလေးပါ။ အဖေက ချင်း၊အမေကတရုတ် ဆိုတော့ဖြူဖြူလေးနဲ့ ပြည့်ပြည့်လေးပေါ့ အရပ်ကတော့ ၅ပေ ၅လောက်ရှိတယ်။ စကားပြောနေရင်းနဲ့ ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကသူနို့အုံဖောင်းဖောင်းလေးကိုကြည့်ကြည့်နေမိတယ်။သူလဲရိပ်မိတယ်ထင်ပါတယ်။ တိတ်ဆိတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆန်ကျင်ဘက်လိင် နဲ့နှစ်ယောက်ထဲရှိနေတဲ့အချိန်မိန်းကလေးတွေစိတ်လှုပ်ရှားတတ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုယုံပါတယ်။ စကားပြောနေရင်းနဲ့ကျွန်တော့်ဘေးကိုလာထိုင်ပြီးတော့ သားသားရော ရည်းစားရှိနေပြီလားတဲ့ အဲ့လိုမေးလာတော့ကျွန်တော် ဇတ်လမ်းတွေလုပ်ပြီးပြန်ဖြေခဲ့မိတယ် အရင်ကရှိတဲ့အကြောင်း ပြီးတော့ကောင်လေးတွေနဲ့ ဇတ်ရှုပ်တဲ့ အကြောင်းပေါ့ ။
ကျွန်တော်ပြောပြတော့သူသနားသွားတယ်ထင်တယ် ပြီးတော့စိတ်လာပါလာတယ်။ ကျွန်တော်ဆံပင်ကိုလာပွတ်ပေးပြီးတော့ “သားသား ရယ် …. သနားပါတယ်။” ကျွန်တော်လဲအလိုက်သင့်လေး မမ ရင်ခွင်ထဲကိုခေါင်းလေးမှီထားလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ပါးက မမ နို့အုံဖောင်းဖောင်းအိအိလေးကိုထိကပ်လို့ပေါ့။ ချွေးနံ့လုံးဝမရှိတဲ့ မမရဲ့ကိုယ်နံ့သင်းသင်းလေးကိုရှူရှိုက်ရင်းသာယာနေမိတယ်။ ပြီးတော့ မမ ရင်ခုန်သံတွေမြန်လာတာကိုကြားနေရတယ် မမရဲ့သက်ပျင်းချသံသဲ့သဲ့နဲ့အတူ ကျွန်တော့်လက်တွေလဲမမ ခါးလေးကိုဖက်ပြီးတော့အတွင်းခံဘောင်းဘီ ခါးစီလေးကိုပွတ်ပေးနေမိတယ်။ တစ်ခဏတွေထိတွေမှုတွေအောက်မှာ မမနဲ့ကျွန်တော်စိတ်တွေ ပြောင်းလဲကုန်တယ်လေ။ ကျွန်တော့်ခေါင်းလေးကိုမော့ပြီးမမ မျက်နှာလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ မမ လဲပြန်ကြည့်နေတယ်။ မမ မျက်ဝန်းထဲမှာလဲ ရမက်အခိုးအငွေ့လေးတွေနဲ့ဝင်းလက်လို့ပေါ့။ တဖြည်းဖြည်းခြင်းတိုးလာတဲ့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို မျက်လုံးလေးမှိတ်ရင်းကြိုလင့်နေတဲ့ မမရဲ့ အိထွေးနေတဲ့ ပန်းနုရောင်နှုတ်ခမ်းသားတွေက ဆောင်းမနက်ခင်းမှာ ပွင့်အာနေတဲ့ နှင်းဆီပွင့်လွှာလေးအတိုင်း လှပနေတယ်။ မမရဲ့ မထူမပါးနှုတ်ခမ်းလွှာလေးကိုစုပ်ယူရင်း ကျွန်တော်လက်တွေက မမရဲ့ ပြည့်တင်းတဲ့ပေါင်တံအိအိလေးတွေကို ဂါဝန်ပန်းရောင်လေးပေါ်ကနေ ပွတ်သပ်ပေးနေမိတယ်။
အနမ်းချိုချိုတွေရပ်သွားတဲ့တခဏမှာပဲ……… “မမ …. သားသားတို့အတူနေရအောင်နော်” “သားသားရယ် မမ တို့တွေ မောင်နှမအရင်းတွေလိုအတူနေလာကြပြီးမှ အခုလိုပြောင်းလဲသွားလို့ကောင်းပါ့မလား” “မမရယ်….။” မမ မျက်နှာပေါ်မှာတွေဝေမှုအရိပ်အယောင်တွေနဲ့ ခဏလေးငြိမ်သက်သွားတယ်။ပြီးမှ “သားသား အခန်းထဲသွားရအောင်လေ ဒါဆိုလဲ” ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာပျော်သွားမိတယ် မမ လက်ကိုတွဲပြီးတော့ မမအခန်းထဲကိုနှစ်ယောက်အတူဝင်သွားလိုက်တယ်။အခန်းမီးလေးကိုမှိတ်လိုက်ပြီးတော့ညအိပ်မီးဝါ၀ါလေးပြောင်းထွန်းလိုက်တဲ့ ခဏ တိတ်ဆိတ်တဲ့ အခန်းလေးက စိတ်ကူးရင်ဆန်တဲ့ အချစ်သင်္ကေတတွေလွမ်းခြုံသွားတယ်။ တစ်ဦးရဲ့ခနွာကိုယ်ကိုတစ်ဦးတပ်မက်စွာဖက်တွယ်ရင်းတရွေ့ရွေ့နဲ့ ကုတင်လေးပေါ်ကိုလိမ့်ဆင်းသွားတယ်။ ပေါင်သားဖွေးဖွေးလေးတွေက ကောင်းကင်ပေါ်ကကြွေဆင်းလာတဲ့အလှနတ်သမီးလေးတစ်ပါရဲ့ပုံတူပန်းချီကားတစ်ချက်လိုဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ပေါ့။ မမရဲ့လှပတဲ့ ပေါင်းတံလေးကိုနမ်းရင်းဂါဝန်လေးကိုတစ်ဖြေးဖြေးမတင်လိုက်တယ်။ ပေါင်တံလေးရဲ့အဆုံးမှာတော့ မမ ရဲ့ မို့ဖောင်းနေတဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို ကာရံထားတဲ့ အတွင်းခံပန်းရောင်လေးကဆီးကြိုနေလေရဲ့။ ဂါဝန်လေးကိုတစ်ဖြေးဖြေးလှန်လာတော့ မမတစ်ယောက်သူဂါဝန်လေးကိုချွတ်ပေးရှာတယ်။
“မမရယ်……လှလိုက်တာ။” “မမနို့လေးတွေကတင်းနေတာပဲနော်။” ဆိုတော့ မမတစ်ယောက်အပြုံးချိုချိုလေးနဲ့တုံ့ပြန်လာတယ်။ ဖြူဝင်းတဲ့ ကိုယ်လုံးအိအိလေးပေါ်မှာပန်းရောင်အတွင်းခံလေးနဲ့ အနက်ရောင်ဘော်လီလေးပေါ်က မမရဲ့ ရင်သားဖွေးဖွေးလေးတွေ ဖောင်းကြွလို့ အဆီပိုမရှိတဲ့ ခါးသိမ်သိမ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးတွေအောက်က ဖောင်းမို့အိစက်နေတဲ့ မမရဲ့ ဆီးခုန်လေးကိုတယုတစ်ယ နဲ့ ကျွန်တော်အနမ်းလေးပေးလိုက်မိတယ်။ မမဘေးမှာလှဲနေပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မမကိုဖက်ထားရင်းနဲ့ မမလည်တိုင်ဖွေးဖွေးလေးပေါ်က သွေးကြောစိမ်းစိမ်းလေးတွေကို ဖွဖွလေးကိုက်ပေးလိုက်တော့ မမတစ်ယောက် လူးလွန့်လို့ မွေ့ယာခင်းလေးကိုဆုပ်ချေနေတယ်။ မမပုခုံးပေါ်ကဘော်လီကြိုးအနက်လေးကိုတွန်းချရင်းပုခုံးသားဖွေးဖွေးလေးတွေကိုနမ်းပေးနေရင်းနဲ့ မမကြောပေါ်ကဘော်လီချိတ်လေးကိုဖြုတ်ချလိုက်တော့ တင်းရင်းအိစက်နေတဲ့ မမ ရင်သားဖွေးဖွေးလေးတွေက အထိန်းအကွတ်မဲ့ အိဆင်းလာတယ်။ နို့ဖွေးဖွေးလေးတွေအလယ်မှာပန်းနုရောင် အသီးလေးရဲ့ အလှက ငွေနှင်းပွင့်တွေပေါ်မှာ ကြွေဆင်းလာတဲ့ ပန်းနုရောင်ပန်းလေးတစ်ပွင့်အလားအသက်ဝင်နေလိုက်တာ။
မမရဲ့ အိထွေးနေတဲ့ နို့ အုံလေးကိုဆုပ်နယ်ရင်းခလေးတစ်ယောက်လို့ စို့နေမိတော့မမရဲ့ နှုတ်ခမ်းထွေးထွေးလေးတွေဆီက ငြီးသံတိုးတိုးလေးထွက်လာတယ်။”အား……အား……အား…….” “ကောင်းတယ် သားသားရယ်……” “အရမ်းကောင်းတယ်……” တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ အိပ်ခန်းငယ်လေးထဲမှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မမကိုလိုးရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အသိကကျွန်တော်စိတ်ကိုအရမ်းလှုပ်ရှားစေတယ်။ ကျွန်တော်ဘောင်းဘီလေးကိုချွတ်ချလိုက်တော့အတွင်းခံလေးထဲမှာတင်းနေတယ် ကျွန်တော်လီးကိုမမတစ်ယောက်ကြည့်နေတယ်။ “သားသားလဲမငယ်တော့ဘူးနော်”တဲ့ ကျွန်တော်ကိုကုတင်ပေါ်မှာလှဲခိုင်းပြီးတော့ ကျွန်တော်အတွင်းခံလေးကိုမမ ကိုယ်တိုင်ချွတ်ပေးတယ် အတွင်းခံဘောင်းဘီအောက်က ထိုးထွက်လာတဲ့ ကျွန်တော့်လီးလေးကိုတယုတယကိုင်းရင်း ကျွန်တော်ပေါင်ကြားလေးထဲကိုမမတစ်ယောက်ခေါင်းလေးတိုးဝင်လာတယ်။ပေါင်ကြားထဲမှာလှပပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့ မမတစ်ယောက်လီးလေးကိုကိုင်ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ဖွဖွလေးငုံရင်း လီးခေါင်းလေးတစ်ခုလုံးကို မမရဲ့လျှာနဲ့ပွတ်သပ်စုပ်ယူနေတယ်။
မမရဲ့လက်တစ်ဖက်ကလဲ ဂွေးဥလေးနှစ်လုံးကိုဆုပ်နယ်ရင်းပေါ့။ “ပြွတ်ပြွတ်……ပြွတ်… အား ကောင်းလိုက်တာမမရယ်။” “တကယ်လား …. မမက သားသားကိုကလေးထင်နေတာ မဟုတ်တော့ဘူးပဲ” ပြောရင်းနဲ့ ပက်လက်လေးဖြစ်သွားတဲ့ မမပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့မမကိုဖက်ထားလိုက်တယ် ပြီးတော့အရွေ့ရွေ့လျှောဆင်းလာရင်းနဲ့ မမ ရဲ့ ပေါင်ကားကားလေးကြားထဲကိုကျွန်တော်မျက်နှာကရောက်သွားတယ် မမစောက်ဖုတ်လေးတစ်ခုလုံးပြောင်ရှင်းနေအောင်အမွေးလေးတွေရိတ်ထားတယ်ဗျာ ပြီးတော့မမပေါင်လေးတွေကိုဖွဖွလေးပွတ်ရင်းနဲ့ မမရဲ့ ဖောင်းမို့နေတဲ့စောင်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းလွှာလေးတွေကိုလျှာနဲ့ဖွဖွလေးယက်နေမိတယ် လျက်နေရင်းနဲ့ အကွဲကြားလေးထဲကိုလျာလေးထည့်လိုက်တော့ “အ…အ….အ…..အား…” “သားသားရယ် ” ဆိုပြီးပေါင်လေးကိုအတင်းစိကယ်လာတယ်။ ကျွန်တော်လဲပေါင်လေးကိုပြန်တွန်းရင်း မမရဲ့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကြားမှာ ရေးရေးလေးပေါ်နေတဲ့ မမရဲ့စောက်စိလေးကိုလျှာဖျားလေးနဲ့ပွတ်ဆွဲလိုက်တော့ မမတစ်ကိုယ်လုံးကောတက်လာတယ် လက်တွေလဲမွေ့ယာခင်းကိုဆုပ်ချေလို့ တိတ်ဆိတ်တဲ့ အခန်းလေးလဲမမရဲ့ အော်ငြီးသံတွေနဲ့ အသက်ဝင်လာတယ်။
“အား…အရမ်းကောင်းတယ်သားသားရယ်။အား…အား….မမစောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံးလဲ အရည်လဲ့လို့ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေပါ ပြည့်တင်းကြွရွလို့လာတယ် မမစောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံးကိုအားရအောင်နမ်းစုပ်ပြီးတော့ မမပေါင်ကြားလေးထဲမှာ ထိုင်ရင်း ကျွန်တော့်လီးလေးနဲ့ မမစောင်ဖုတ်လေးကိုတေ့ထားပြီးတော့ “မမ… လိုးတော့မယ်နော်” “အင်း…..ဖြေးဖြေးပဲလုပ်နော်သားသား” မမစကားသံတွေမဆုံးခင်ပဲ ကျွန်တော်လီးထိပ်လေးကို မမရဲ့ စောင်ဖုတ်လေးထဲဖိသွင်းလိုက်တော့ တင်းတင်းလေးနဲ့ နွေးအိစိုစွတ်နေတဲ့ မမစောက်ဖုတ်အသားစိုင်လေးတွေကကျွန်တော့လီးလေးကို အိအိစက်စက်လေးကြိုဆိုလို့ ဖော်မပြနိုင်တဲ့ သာယာကျေနပ်မှုတွေကိုခံစားလိုက်ရတယ် မမလက်တွေကလဲကျွန်တော့် ကိုတင်းတင်းလေးထွေးပွေ့လို့ပေါ့ “အ… နာတယ်သားသားရယ် …. မမ ကိုဖြေးဖြေးလေးပဲလိုးနော်” “ဟုတ်မမ” ကျွန်တော်လဲဆက်မသွင်းသေးပဲ မမစောက်ဖုတ်လေးကိုဖြေးဖြေးပဲလိုးနေမိတယ် “မမ” “ဟင်” “နာသေးလား” “သိပ်မနာတော့ဘူး” “ကောင်းလားမမ … သားသားလိုးတာ” “ဟင်း….. ကောင်လေးနော် ကိုယ်အမ ကို ဒီလိုပဲမေးရလား” “မမ ရယ် …..အဲ့ လိုသဘောမဟုတ်ပါဘူး သားသားကမမ ကိုကောင်းစေချင်လို့ပါ” ကျွန်တော့စကားဆုံးတော့ မမမျက်နှာလေးပေါ်မှာအပြုံးလေးတစ်ပွင့်ကိုမြင်လိုက်ရတယ် ပြီးတော့ မျက်လုံးလေးကိုမှိတ်ရင်းအသက်တွေကိုပြင်းပြင်းလေးရှူလိုက်ပြီးတော့ “အရမ်းကောင်းတယ် သားသားရယ်” “သားသား မမ ကိုလိုးတာ မမအရမ်းကောင်းတာပဲ” ပြောရင်းနဲ့ မမဆီခုန်လေးကိုကောပေးလာတယ် ကျွန်တော်လဲ ဖြေးဖြေးချင်းလိုးနေရာကနေ မမ စောက်ဖုတ်လေးထဲကိုအဆုံးထိဆောင့်သွင်းလိုက်တော့ “အား…….” “နာသွားလား မမ” “အင်း …..” “Sorry နော် မမ ” “ရပါတယ် မမခံနိုင်ပါတယ်” “ဒါဆိုလိုးတော့မယ်နော်မမ …ပြီးခါနီးရင်ပြောနော်” “အင်း” မမဆီကခွင့်ပြုချက်ရတော့ ကျွန်တော်လဲမမ ဂျိုင်းကြားမှာလက်လေးလျှို မမ ပုခုံးတွေကိုကိုင်ပြီး တော့ မမစောက်ဖုတ်လေးထဲကို ဆောင့်နေမိတော့တယ်။
အချက်ငါးဆယ်လောက်ဆောင့်လိုက်ပြီးချိန်မှာပဲမမဆီကအသက်ရှုသံပြင်းပြင်းလေးတွေထွက်လာတယ် တစ်ပြိုင်နက်ထဲပဲ “သားသား မမ ပြီးတော့ မယ် လုပ်လုပ်” မမ အသံလေးကိုကြားတော့ ကျွန်တော်လဲ ပိုစိတ်ပါလာမိတယ် ဆောင့်နေရင်းနဲ့ အ…..အ….အား……အား…. သားသား မမ ပြီးပြီ …… အား……. မမဆီကဆွဲဆွဲငင်ငင်အော်ညီးသံအဆုံးမှာ ကျွန်တော်လဲ လီတစ်ချောင်းလုံးကျင်တက်လာတယ် ဆောင့်နေရင်းနဲ့ပဲ မမ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးထဲမှာ ကျွန်တော့ လီးရေတွေကိုပန်းထုတ်ရင်းအဆုံးသတ်လိုက်မိတယ်။ အခန်းလေးကတစ်ခါပြန်လည်တိတ်ဆိတ်လို့ ကျွန်တော့ လက်မောင်းလေးပေါ်မှာအပြုံးလေးနဲ့ ကြည့်နေတဲ့ မမနဖူးလေးကိုနမ်းရင်းကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ သံယောဇဉ်တွေဟာလဲ အရောင်တွေစွန်းထင်းခဲ့ပါတော့တယ်။